[2014-07-16 오후 4:39:00]
अन्तत:एमालेको नवौ महाधिवेशनले केपि शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । माधव नेपाललाई ४४ मत अन्तरले पराजीत गर्दै पाचा वर्षे कार्यकालको लागी ओली एमाले अध्यक्ष भएका छन् । महाधिवेशनको पूर्वसन्धयामा दुई खेमावीचको आन्तरीक टकरावले गुट र उपगुटमा विभाजीत नेता तथा कार्यकर्ताहरुका कारण महाधिवेशनको रौनक धेरै नै वढायो । कति ओलीको पक्षमा लागे त कति नेपाललाई जिताउन लागे । महाधिवेशन केन्द्रित जिल्ला तथा केन्द्रीय भेलामा विचारोतेजक वहस पनि भएकै हुन् । जे जस्तो भएपनि निर्वाचनले नेता ओलीलाई पाचा वर्षको लागी पार्टीको नेतृत्व अघि वढाउने कार्यभार सुम्पिएको छ । संगै उनको कार्यकाल चुनौतिपुर्ण र गरेर देखाउने अवसरको रुपमा रहन सक्ने देखिन्छ ।
पहिलो त ओली नेतृत्वले गुट र उपगुटमा विभाजीत नेता तथा कार्यकर्तालाइ एउटै कितामा उभाएर सजह ढंगले अगाडी वढाउनु नै फलामको चिउरा चपाए जस्तो देखिन्छ । किनकी नेता तथा कार्यकर्ताको निराशा र अन्तिोष नेपाल पक्ष र ओली पक्ष खेमाको सतोसरापले देखाएकै हो । राम्रा भन्दा हाम्रा कार्यकर्तालाई च्यापने र पोस्ने परम्पराले एमालेलाई चाहिने भन्दा वढि नै हदसम्म खेमामा पुराएको महाधिवेशनको समयमा कार्यकर्ताको अभिव्यीक्त थियो । यसरी विभाजीत गुटलाई अवका दिनमा क्षमता र कामको आधारमा जिम्मेवारीले मिलाएर एकढिक्का वनाएर अघि वढाउन सक्नु नै अध्यक्ष ओलीको मुख्य चुनौति र कार्यभार रहन सक्छ । उनले यस कार्यलाई सहज ढंगले अघि वढाउन सकेको खण्डमा क्रमश: विभाजीत मनहरु मिल्न सक्ने देखिन्छ । अन्यथा महाधिवेशनको सेरोफेरोमा नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले लगाएको आरोप र असन्तोषहरुको सम्वोधन हुन नसके ओली माथि औला ठदिने दिनको सुरुवात चाडै नै नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपाली राजनीतिमा एमालेको स्थान र भूमिका जे थियो र जस्तो छ र रहला सो अनुसार पार्टीले अन्य दलका नेता तथा पार्टीसंग पनि उसै गरि सहकार्य गरि अघि वढ्न ओली नेतृत्व सवल हुनुपर्ने उतिकै देखीन्छ । संगसंगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ओली नेतृत्वले सजह भूमिका निभाउन सकेन भने त्यसले राम्रो परिणाम ननिक्लने पक्का छ । खेमा र गुटमा विभाजीत एमाले भित्र एकले अर्कोको कूरो सुन्न नै नसक्ने अवस्थामा महाधिवेशन सम्पन्न भयो । नतिजा आयो । नेता ओलीलाई अध्यक्ष वनायो । यससंगै एमाले भोलीको दिनमा एमाले कसरी अघि वढ्छ भन्ने चासो र जिज्ञासम उठुनु स्वाभाविक नै हो ।
यो अवस्थामा व्यक्ति प्रधान गतीविधीले सम्रग पार्टीको अवस्थामा नै सोच्नु पर्ने नियतीको विकास हुन खोज्यो भने अन्तत नेपाल पक्ष र ओलीको पक्षाको मात्र नभई सम्रग एमालेको नै दूभाग्य हुने पक्का छ । एउटै आस्था र विचारमा हिड्नेहरुले अव एकवद्ध एमालेको कोरा कल्पनामा डुवेर मात्र नपुग्ने विकसीत घटनाक्रमले देखाएकै हो । पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरुको आपसी सम्वन्धले नै एमालेको ओली नेतृत्वको पाचा वर्षे कार्यकाल सफल हुने देखिन्छ । अन्यथा खुटा तान्ने र सानोतिनो कृयाकलापमा पनि औला उठाउने प्रर्वतिले न केपि ओली राम्ररी अघि वढ्न सक्दान् न माधव नेपाल नै सफल रहलान् । यसले एमाले राजनीतिमा त प्रभाव पर्ने नै छ नेपाल र ओलीहरु भएर नै एमाले भएकाहरुको अवस्था पनि सोच्नु पर्ने नहोला भन्ने कसरी ?
एमालेको आस्था र सिद्यान्तमा हिडनेहरु भोली वैचारीक रुपमा विचलीत हुने अवस्थाले एमालेको अवस्था कहा पुराउला ? त्यसतर्फ सोचेर अघि वढ्न एमालेका शीर्ष नेताहरु सक्षम होलान् नहोलान् त्यो भोलीको अवस्थाले नै देखाउला ?